onlineakhabar.com: बलिउडका नायक अक्षय कुमार यसरी दर्शकहरु सामु नै रोए, आखिर किन? (भिडियो सहित)
Bollywood News, Entertainment, India News, Main News, Video, Viral Video » बलिउडका नायक अक्षय कुमार यसरी दर्शकहरु सामु नै रोए, आखिर किन? (भिडियो सहित)
बलिउडका नायक अक्षय कुमार यसरी दर्शकहरु सामु नै रोए, आखिर किन? (भिडियो सहित)
बलिउड फिल्म इन्ड्रस्ट्रीमा लगातार धेरै हिट फिल्महरु दिंदा पनि अक्षय कुमारलाई अहिले सम्म कुनै अवार्डस् मिलेको छैन । के अक्षय त्यसकोलागी योग्य छैनन् ? तर अक्षय अवार्डस् क्याटगरीमा आफ्नो नाम समावेश नहुनुका कारण यस्तै प्रश्नमा खतरनाक खेलाडी भनेर चिनिने अक्षय सबै सामु स्टेजमा उनि निकै भावुक बने र उनको आँसु समेत आएको थियो ।
हालै ‘हाउसफुल ३’ को सफलतालाई ध्यान दिंदै एउटा प्रेस कन्फ्रेस भएको थियो । जहाँ अक्षयसँग सोधीएको प्रस्नले उनि भावुक बनेका थिए । प्रश्न यस्तो थियो कि उनलाई अवार्ड्स किन मिल्दैन? यो प्रश्नमा अक्षय कुमारको आँखामा आँसु समेत आएको थियो र रुदै उनले भने ‘अवार्ड मलाई कहिले पनि मिल्दैन.. तर मलाई कुनै समस्या छैन.. एक दिन आउनेछ, मलाई अवार्ड पनि मिल्नेछ’ तर यो सबै मजाकको रुपमा भनेको देखिन्थ्यो । अक्षयले रुदै आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा केही पत्रकारहरु हाँसेको पनि सुनिन्थ्यो । हेर्नुहोस् तपाई पनि यो भिडियो
Tags : Bollywood News Entertainment India News Main News Video Viral Video